I-Chalet eFeldis enegadi yephupha kunye nombono weentaba
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguYvonne
Igumbi leeholide elinothando kunye nelokukhululeka kwi-chalet yokusondela kwindalo kunye nokuphila kakuhle.
Ukukhanya okuninzi kumagumbi, umbono omangalisayo weentaba zeGraubünden kunye nendawo yokuhlala ephangaleleyo ihambisa ikhefu kwixesha ngalinye lonyaka.
Kude nokuphithizela nokuphithizela, i-1500m ngaphezu komphakamo wolwandle Kwilali entle yeentaba yaseFeldis, apho impungutye kunye nomvundla zithi good night, i-idyllic Chalet Lieuretta da Tscharfs ikumema ukuba ujike iwotshi ngasemva kwaye ukonwabele ngokulula. Chalet Lieuretta da Tscharfs
UFeldis, owaziwa ngokuphumla nokuphumla, utsala abakhenkethi besixeko abavela kwihlabathi liphela. Indawo ekhangayo, enika amathuba amaninzi okukhenketha okunomdla, ihlobo kunye nemidlalo yasebusika kwaye ngokuqinisekileyo eya kwenza iholide yakho ibe ngamava angenakulibaleka.
Igumbi eli-3 elinesiqingatha kwigumbi elinosapho elinobuhlobo, i-chalet evalelweyo enegadi enkulu. Indlu yethu ethandekayo uRuth uhlala ezantsi endlwini kwaye uhlala ekhona kuyo nayiphi na imibuzo onokuba unayo. Indawo ezolileyo nenelanga enombono omangalisayo weentaba ukuya eFlims / Laax, ePiz Beverin naseHeinzenberg.
Impahla etofotofo kunye netofotofo: igumbi lokuhlala / lokutyela, igumbi eli-1 elinebhedi ephindwe kabini kunye negumbi eli-1 elineebhedi ezi-2 ezingatshatanga, ibhafu / ishawa / indlu yangasese, ikhitshi, ukufudumeza okuphakathi, iTV kunye nesitovu somthi esithambileyo kwigumbi lokuhlala.
Indlu yimizuzu emi-5 ngaphezulu kweziko lelali yaseFeldis. I-Terrace, i-lawn yakho kunye nendawo epholileyo yokuhlala yegadi enendawo eninzi. Ilungele abantwana kunye nabantu abafuna uxolo noxolo. Indawo yokupaka eyakhe enofikelelo olugunyazisiweyo (inokwenzeka kuphela kwiimeko ezingenakhephu).
I-ski slope kunye nesikolo se-ski sinokufikelelwa ngeenyawo malunga nemizuzu emi-5-10. Kwiimeko ezintle zemozulu, kukho i-ice rink yendalo kwi-Alp Raguta, enokufikelelwa ngo-chairlift, kunye ne-toboggan run. Ungakwazi kwakhona ukutyibilika kwaye ubuyele kwi-chalet ngqo ukusuka kwi-ski slope.
Ubuncinci bokuhlala: ubusuku obu-3 (ukuhlala ixesha elifutshane ngesicelo)
Ukuhlala okunokwenzeka: abantu abayi-1-5
Izixhobo kunye nolwazi
Ukuzonwabisa / umnikelo wezemidlalo
Ukhuko lomntwana xa uceliwe
Ibhalkhoni / ithala
Iimali ezongezelelweyo zihlawulwa ngemali kwisiza;
Irhafu yabakhenkethi (ngokwexabiso leSaision)
Ibhedi kunye nelinen yokuhlambela (CHF 25.00 ngomntu ngamnye)
Ukutshaya akuvumelekanga kuwo nawaphi na amagumbi
I-chalet yodwa ngokupheleleyo. Akukho sakhiwo sokuhlala kude nabanzi, kuphela iialpaca kunye neeshedi zeenkomo. Kodwa usekwimizuzu emi-5 ngeenyawo kwiziko lelali, apho kukho iivenkile kunye neeresityu. Iphupha awulifumani rhoqo kule mihla. Ziphathe ngeentsuku ezimbalwa zokuphumla kunye nokuphumla kwindawo apho kungekho ngxolo ngaphandle komlambo kunye nesandi sehlathi.
Ndihlala ndikhona ngenxa yakho ngefowuni.